Walabummaa Miidiyaa: Carraa pireesii Itoophiyaafi yaaddoo isaa - BBC News Afaan Oromoo
Walabummaa Miidiyaa: Carraa pireesii Itoophiyaafi yaaddoo isaa
Guyyaan walabummaa pireesii addunya walta'iinsa UNESCO fi mootummaa Itophiyaan Finfinneetti kabajamaa jira. walabummaan miidiyaa amma Itoophiyaa keessatti mula'atu of eeggannoo dabalataa akka barbaadu ogeeyyiin ni dubbatu.
Waggaa tokkoo as jijjiirama siyaasaa biyyattii keessatti dhuferraa kan ka'e gaazexessitootni sababa gabaasa isaaniif hidhamanii turan gadhiifamanii, miidiyaalee ugguuramanii turan akkasumas kanneen biyyoota alaa keessaa gabaasaa turanis bilisaan akka hojjetan ta'aa jira.
Jijjiiramni gama walabummaa preesiin mul'ate daddamaqiinsa barruulee turan keessatti uumeen dabalataan barruuleen haaraaniis akka dhalaan sababa ta'eera.
Barreessaa Solomoon Siyyuum waggoota darbaniif barruulee akka Fitiih, Itoophisiifi kaan irratti yaaada isaa bareessa ture jijjiirama dhufeen boodas hirriyoota isaa biroo waliin ta'uun barruu 'Bole Times' jedhamu maxxansiisu eegalera.
Barootni darban mirgi miidiyaalee maxxansaa Itoophiyaaf bara rakkoo turan jedha Manajiing Daayireekatarri 'Bole Times' Solomoon.
''uummatni keenya hubannaan preesiirratti qabu gadaanaadha, mootummoonni biyya bulchaniis uummatichuma keessaa bahu waan ta'eef hubannaa hin qaban ture'' jechuun ibsa.
''Mirgi preesii akka jiru sittii himamaa yeroo mirga kana shaakaluu jalqabdu mana hidhaatti guuramuutu rakkoo guddaa ture'' Jechuun dubbata.
Waggoota jahan darban bara bilisummaan miidiyaa rakkoo keessa galee gaazexessitootnifi barreesitootni hidhamaa turan ''ani soda malee barreesse akka carraa dararaan hedduun narra hin geenye'' kan jedhu solomoon, gama Kanaan amma jijjiirama guddaatu jiraa jedha.
''Barruuleen kana dura turaniis akka bilisa baasaatti of ilaalaa turan'' jechuun quucaruu preesii Itoophiyaaf qaamolee lamaan kana itti gaafatamtoota goodha.
Walabummaan miidiyaalee fi Yaaddoo isaan fidanii dhufan
Image copyright Bole times
Amma ammo bilisummaan miidiyaa argame gaarii ta'eet waantoota hedduun garuu wal borceera jedha.
'' Amma Gaazexessumaaniis, aktiviizimiinis siyaasa gaggesuunis hunduu wal dhayaa jira. Preesiin mataasaa danda'ee naamusa isaa eegee deemuutu irra jira.''
Seeronni miidiyaa kana dura turan akkuma biyyoota kaanii walabummaa miidiyaa seerota heeyyamanis hanqina qaamolee lamarraa kan ka'e preesiin rakkoo keesa turee jedhu dhiyeenya kana Daayireekatara abbaa taayitaa Broodkaasti Itoophiyaa kan ta'an Getaacheew Dinquu(PhD)
''Seeronni kunniin haa jiraataniiyyuu malee, faallaa seerri taa'uun ture kan pireesiin biyyattii hojii hojjetu. . Gaazexeessitoonni waan barreessaniin gaafatamanii mana murtiitti dhiyaachuu, hammaannaanis gara hidhaatti seenuunis tureera.''
Dagaagina demookraasii biyyattif miidiyaalee shoora olaanaa taphatu jedhu Dr. Getacheew.
Yaada Ministirri muummee ''Yoo rakkoo qaba tahes, dursa walabummaa isaanii mirkaneessuun, boodarra rakkoo qaban furuu wayya,'' jedhutti akka waliigalaniis dubbatu.
Miidiyaaleen biyya keessaa walabummaa argatanitti fayyadamuun hojiilee biyyattiif bu'aa buusan hedduu ni hojjetu jedhanii akka amananiin dubbatu.
Wantootni hedduun akka yaaddootti ilaalaman jiruu jedhu.
''Mallattoowwan yaaddoo kan tahan, gabaasaawwan sirrii hin taane, gabaasaawwan miiraan oofamaniifi loogan, akkasumas gabaasonni qajeeltoo gaazexeessummaa hin eegne baayyachuu danda'u yaaddoon jedhu jira.Yaaddoon kun dabalaa deemu taanaan, demokraasii biyyattii tumsuurra, inumaayyuu miidhu kan jedhu yaaddoodha.''
Biyya Ameerikaatti Yunivarsiitii New Meeksikootti barsiisaa Gaazexessumma kan ta'an Abdiisaa Zara'aay(PhD) akkuma dhaabbilee siyaasaa biyya ormaa turan biyyatti galanii hidhannoo hiikatan miidiyaalenis qabsoo keessa waan turaniif haaromuu qabuu jedhu.
''Miidiyaaleen bilisummaan akka hojjetan ta'uun gaarii ta'ee sirna qabeessa ta'uu dhabuun isaa balaa qaba. Jijjiiramichi rakkoolee garaa garaan sakaalamaa wayita jiru kanatti miidiyaaleen akkasitti itti fufu taanaan biyyitti rakkoo hamaa keessa galchuu danda'u''
Midiyaaleen akkamitti yoo hojjetan biyya fayyadu?
Barreessaa Solomoon Siyyuum miidiyaalen wanta dhagahaniifi odeefamu hunda bareesuu bira darbanii gabaasni isaanii dhibbaa akkamii qabaachuu akka danad'u yaaduu qabuu jedha.
Gabaasonni isaanii nageenya fi waliin jireenya uummatootaa haala hin diigneen akka ta'uuti hojjetamuu qabaa jedha.
''Jijjiiramni biyyattii keessa jiru lafa qabatee dhaabbilee dimookrasii utubaniin yoo deeggarame rakkooleen walxaxoon miidiyaalee maxxansaa Itoophiyaa mudatan furamaa deemu jedhee akka yaadus hima.''
Dr. Abdiisaan gama isaaniin walabummaan itti gaafatamauummaa waliin hin dhufu taanaan rakkisaa dha.
Miidiyaaleen to'atamu barbaadu qaamni isaan to'atu garuu qaama motummaa ofa osoo hin taane qaamni dhibbaa miidiyaarraa bilasa ta'ee sirni ittin of to'atan diriiruu qaba jedhu.
Bu'uureffamuu fi gufuuwwan Barisaa irratti Gaazexeessitoonni gameeyyiin maal jedhu?
21 Bitooteessa 2019
Viidiyoo Guyyoota 100: Haaromsa diinagdeefi abdii fayyadamtoota intarneetii
11 Adooleessa 2018